एउटै बाख्राको मुल्य ६५ लाख ! मूल्य यति पर्नुको कारण अचम्मको छ .. – ताजा समाचार
सामान्यतया हाम्रो टोल छिमेकमा एउटा बाख्राको मुल्य बढिमा २५/३० हजार रुपैयाँसम्म पर्छ । तर, सुन्दै पनि तपाईंलाई पत्यार नलाग्न सक्छ एउटा बाख्राको मुल्य ६५ लाख रुपैयाँ तोकिएको छ ।
तर, यो घटना नेपालमा भने होइन । भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीका हो । जहाँ बाख्राको मेला लागेको थियो । त्यही क्रममा पुरानो दिल्लीका कबुतर बजारमा छोटे अलीले ल्याएको एक बाख्राको मूल्य ६५ लाख रुपैयाँ तोकिएको थियो ।
त्यो बाख्रालाई मालिकले घाँसको साथमा चना र किसमिस खुवाउने गरेका थिए । उनका अनुसार बाख्रामा ‘अल्ला हुँ’ र ‘७८६’को निशाना छ । त्यही धार्मिक ट्याग लागेका कारण बाख्राको मुल्य अत्याधिक राखिएको हो । इस्लाम धर्ममा ७८६ काे अर्थ ईश्वरको नाममा अर्थात् बिस्मिल्लाही रहमान अर रहीम हुन्छ ।
सुकेको बाँसमा प्लास्टिकले अड्याएको धारा सांसदद्वारा उद्घाटन ! उद्घाटको दृश्य हेर्दै मानिसहरु पेट मिचिमिची हाँसीरहे !
गुल्मी । छिमेकी जिल्ला बागलुङमा खानेपानी योजना उद्घाटको एउटा दृश्य हेर्दै मानिसहरु यति बेला पेट मिचिमिची हाँसिरहेका छन् । कुनै कमेडी फिल्म जस्तो लाग्ने उक्त दृश्य हो हालै सम्पन्न भयो भनिएको ढिकीचौर खानेपानी योजनाको उद्घटन सत्रको ।
बढो गजव छ कि बाग्लुङ्ग नगरपालिकाको रु ५ लाख ५७ हजार र वडा नं ७ ढिकीचौरबासीको सहयोग गरी करीब रु १२ लाखको लागतमा सम्पन्न भनिएको उक्त योजनाको खानीपानी पाईप सुकेको बाँसमा प्लाष्टिकको डोरीले बाँधेर अडाईएको छ । त्यसैमा धारा खोलेर गण्डकी प्रदेशका सांसद ईन्द्रलाल सापकोटा एवं बागलुङ नगरपालिकाका नगरप्रमुख जनकराज पौडेलले संयुक्त रुपमा भदौ २ गते उद्घाटन गरेका छन् ।
ति दुईले समेत आफ्नो फोन समेत सहयोगीलाई दिएर तस्वीर खिच्नेहरुको ताँती छ । निकै ठुलो कार्य गरे जस्तो गर्वित मुद्रामा देखिन्छ नेता गणहरु । त्यो सुकेको बाँस उद्घाटन कै क्रममा ढलेर नेता गण नै घाईते हुने हुनकी जस्तो अवस्थामा छन । धाराको अवस्था झनै हाँसो उठ्दो छ । राजनैतिक जस लिनका लागि हतार हा्तार उद्घाटन गर्न थालिए जस्तो देखिन्छ ।
फेशमा धेरै हाँस्दै द्रुत विकास हुने देखियो भन्दै ब्याङ्ग गरेका छन । तपाई पनि घोरिएर हेर्नुस् खित्का छाडेर हास्नु हुने छ ।
प्रकाशित भएको : August 1st, 2019